Dagaal Qadhaadh oo ka dhex Qarxay Ciidanka Itoobiya iyo Maleeshiyada Tigreega | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Hargeisa ( Kalshaale ) Dagaal culus ayaa ka qarxay deegano badan oo ku yaala gobolka waqooyiga dalka itoobiya ku yaala ee Tigray, waxaana dagaalkaasi uu u dhxeya ciidamada falaagada iyo kuwa dowladda, sida wararku ay sheegayan.
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=45247
7 Comments for “Dagaal Qadhaadh oo ka dhex Qarxay Ciidanka Itoobiya iyo Maleeshiyada Tigreega”
June 23, 2021 - 12:24 pm
Burbur, Qax iyo Qaxooti
Waqti dheer socdo ayaan
idiin rajeyn INJIRAY AXMAARO
iyo Somaligalbeed oo sidaas
Waxaan Allah ka baryayaa in uu Dagaalka ka socda Ethiopia uu sii socdo ilaa ay Dukum Daakum iska dhigaan qaasatan Dawlada Abbiy Ahmed iyo Tigray iyo Maleeshiyada Amxaaradaâ€¦ aamiin !
Inta uu Ogaadeen cagdheer hor boodayo Somali Galbeed waligeed xoroobi mayso !
Waxa hortaagan madax banaanida Somali Galbeed oo markasta Cadawga Xabashida adeeg sadaan waa Qabiilka Ogaadeen !
Kuwa Calanka Xabashida Xuduudaha Soomaaliya la taagan oo Cadawga u adeega Waa Cagdheer? Waligood Xoroobi maayaan.
Hobyo Godon!! Warkaadu Waa mid sax mashlahu walaalo! Waana sida aad u tiri ! Ilaahayow tusbax goay ka dhig Ethiopia oo uu dagaalkani noqdo mid ay isku umulo dooxaan oo daba Dheerada aamin!! Ethiopia Waa cadowga ummadena somaliyeed iyo Muslimka Geeska Africa! Waa yahuuda Africa lagu dhex ilaaliyo oo ay gaalada Christians ku ilaaliyaan! Aakhiru zamaankana sida uu suubahu inoo sheegay Ethiopian ayaa burbirin doona kabcada Alaah ee mecca ðŸ•‹!! Marka cawaanta cadowga ah ee Ethiopia Waa dad khariban oo cadaawad fog u haya Muslimka! Somali Waa dadka ay ka baqaan oo Ethiopia dagaalo Badan oo Aynu la galnay ku jabinay ilaa Aynu hilibka ceerin barnay sidaa darteed! 30 dagaalka Somalia ðŸ‡¸ðŸ‡´ Ka socda waxa ka danbeeya Waa Ethiopia sababto ahi waxay reer galbeedka rabaan in Somalia noqoto dowlad yar oo ducufo ah oo hoos tagta Ethiopia Waa ayna ku guulaysteen arinkaas!! Oo Somalia land lands shit ah oo u wada adeega danaha shisheeyaha aya laga wada amaamuday ujeedkuna Yahay Oo kaliya in ayna marnaba ogaalin maamuladaas gacan ku rimiska ah dowlada dhexe ee somaliyeed oo xoog leh !! Farmaajo iyo ciidanka uu dhisayo ee ay maalin Waliba ku yihiin lidiga ee ay dacaaayadaha ku wadaan. Maamulada qabiilka ah ee ay ugu horeeyan Kan laajiyiinta qaxootiga xun ee reer qabri bayax iyo jigjiga ka soo cararay ee dhuxulow iyo uusbuur dani macna laawe macal wayne! Waa arin salka ku haysa arin fog oo gaalo soo dhistay Lknse waxma garatada u adeega shisheeyaha ee doqomada ahi ay fulinayaan!! Yes anagu dhexdeena Aynu is qab qabsano Lknse marka ay timaado cadowga ummadena somaliyeed Waa in loo midoobaa walaalo. Labo waxad tiri Ogaden cag dheer ayaa ah kuwa diidan in Somali galbeed xoroowdo absolutely you are right 100% Waa sax hadalkaas Ogaden doqomada inay gumaysi ku hoos jiraan oo ay kabaqaadyada u noqdaan ayay ku caan yihiin oo ay ka hor istaagan yihiin in shacabka somaliyeed ee reer somali galbeed xoriyad helaan!! Waxaa markhaati ma doonto ah sida dhuxulow khaain kaasi uu adoon ugu Yahay hayin ah Kenya oo maayo somaliyeed xasuuqaysa uu difaaco oo ugu taagan Yahay somalia ðŸ‡¸ðŸ‡´ sedex madaxwayne oo soomaliyeed laf dhuun u gashay ayuu ku ahaa hadana ku Yahay Waa kaas 9 bilood diidan doorasho ka dhacda Somalia oo Xitaa heshiiskii ugu danbeeyay ee may 28/2021 durbaba diiday!! Wacalka xumi Gedo ma aabihiis baa u leh Hadii shacabka somaliyeed ee reer Gedo ayna rabin Sababtoo ahi Waa uu hagraday oo hal maalin xasuuqa gafuurya waynta uu adeego kuma dhihin shacabka aad xasuuqayso kenyayay Waa dad aan madaxwayne goboleed u ahay nin camiil ahi kuma dhaco masterkiisa inuu ku afnaqo Waa naag la qabo oo kale ! Marka intaas ayaa Kaaga filan In Ogaden ay yihiin cida somali galbeed xoriyada u diidan Dhaqankooda gurucani Waa saas Xitaa somalia ðŸ‡¸ðŸ‡´ 7 Map ah ay ku soo hogaamiyeen sankadhuudhiga xun xun!! Oo ay u yihiin dhidhid dhowr!!
June 23, 2021 - 7:49 pm
Hadal qiimo leh iyo habaar qiimo leh ayaad sheegtay inta ogaadeen soomaali galbeed kudhex jiro itoopia kaxoroobi maayaan mida kale itoopian waa baabi i doonaan mar dhow
June 23, 2021 - 9:36 pm
Axmaarta iyo Tigreega Allah haysku jabiyo weliba dagaal daba dheeraado.
Hobyo Godan, Abshir iyo Gedo land
Waar Dhuxulayste qudha ku ekaada. Haddaan qabyaalad garanayo waa idin tirin lahaa …….kkkkk laakiin aan idin xusuusiyo
kkkk Waar qabyaaladda xaqiiqda ka fog iska dhaafa.
Ogadeen intuu ku jiro kulaha xoroobi maayaan kulahaa….kkkkk
Yeeysan jugta culus Kambooni, Itixaad, ONLF iwm idin maqal.
Dadku haddii ay qabyaaladdu indha tirto waa iska sidan.
Miyaadan arag waxa jigjiga iwm calanka Somalia ruxaya iyagoo midnima raadinaya.
Allah maxaa victim la dhaleeceeyay inta dagaallada looga baxay.
Taariikhda iyo halgamada oo laga run sheegaa waa caddaalad ayan Somalida badankeeda aqoonin.
June 24, 2021 - 3:58 am
Nacayb Qabiil iguma jiro saaxiib waana ogahay in Ogaadeen dad badan oo Wanaagsan oo qiima leh ay ku jiraan laakiin ibtilada waxay tahay ilaa iyo kasoo Biloow markii Gaaladii gumaystayaashii reer Yurub ay gacanta u galiyeen Xabashida Dhulkii Soomaaliyeed ( Somali Galbeed ) ilaa maantay waxaa Horboodayey ama Hogaanka hayey Reerkan Ogaadeen wax kasoo naasa cadna malaha. Iskadaa wax kalee ayagii baa heshiin la oo waliba dhibaato aan yarayn isku gaystay dhexdooda Soomaalidii kalana dhibaya. Marka miyaysan Haboonayn in maantay la joogo xiligii ay Soomaali oo idili idinla xisaabtami lahayd ?
Dhulkaa waa Dhul Soomaaliyeed waana in loo istaagaa sidii looga xorayn lahaa Xabashida loogana faaiidaysan lahaa Bur burka haysta Ethiopia marka anigu Waxaan oran lahaa yaan markaan lagu fiirsan Ogaadeen ee waa in ay Soomaalida Kaloo dhan u midoobaan haday ahaan lahaayeen kuwa dhex degan Somali Galbeed iyo haday ahaan lahaayeen kuwa degan xuduudaha la jaarka ah!
June 24, 2021 - 9:38 am
Imminkaba aan kugu diido xoreeynta Soomaali Galbeed ha loo jeesto. Madaxda halgankaasina Ogadeenka yay ahaanin. Laakiin victim la eedayo ayaan diiday.
Ogow, beelaha dhex dega waxa ku jira kuwa sheegtay Yahuudnimo ama diiday Soomaalinnimada.
Somali Galbeed waa dal qani ah xoreynteedana laga rabaa Somali iyo muslim oo dhan. Bal Somalidu ha saxeen gudahooda deetana ha badhi gantaaleen dadka Somali Galbeed sidii ay u xoroobi lahayd.
Waxaan rajaynaya inay Xabashidu kala yaaci doonto oo Soomaali Galbeed meel cidla ah ka qaadan doonto xorriyadda insha Allah.